Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vanuatu tondra-drano! Miaraka amin'ny mpitsidika
Ny Independence Park any Vanuatu dia nandray ireo mpitsidika marobe avy amin'ny Noumea ho any amin'ny lanonam-pahalalahany.
Ho fanampin'ireo izay monina ao, ny Independence Park any Vanuatu dia nandray mpitsidika marobe avy amin'ny Noumea miaraka amin'ireo mpitsidika hafa avy amin'ireo nosy manodidina ny hetsika fankalazana ny faha-38 taonan'ny fahaleovantenan'ny firenena ny alahady 29 jolay teo. Eo akaikin'ny Le Meridien Port Vila Resort no misy ilay valan-javaboary. .
Noumea dia renivohitr'i New Caledonia ary eo amoron-dranomasina no misy azy. Hantsana maromaro no manitatra ny tanàna manome morontsiraka sy fomba fijery mahafinaritra. Ankoatry ny fiasa voajanahary, i Noumea koa dia manana tolotra ara-kolontsaina tena manintona ho an'ireo mpizahatany misafidy ny hitsidika any.
Tamin'ny Alahady, olona mihoatra ny 4,000 no niara-niangona tao amin'ny valan-javaboary mba hankalaza satria nandefa stratejika ny polisy hitandrina ny fandriampahalemana tamin'io hetsika io.
Ny praiminisitra Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas, dia nanokatra ny hetsika tamin'ny kabary fankasitrahana izay noresahany ny zava-misy tao amin'ny nosy Ambae izay iharan'ny fipoahan'ny volkano sy ny fianjeran'ny lavenona taorian'izay. Namoaka fisaorana ny governemanta izy naneho ny fanohanany nandritra ity herin'ny natiora mampivarahontsana ity.
Ny nosy kelin'i Vanuatu, Ambae, dia nafindra toerana tanteraka 3 andro lasa izay fanindroany satria nipoaka indray ny volkano nanomboka ny volana septambra lasa teo izay nafindra tanteraka ihany koa. Nanomboka nandraraka lavenona ny volokano Manaro Voui, ary nandidy ny mponina rehetra hiala avy hatrany ny tompon'andraikitra, nandositra nankany amin'ireo nosy mpifanila vodirindrina aminy.
Niresaka ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny fotodrafitrasa koa ny PM, ary nilaza fa tsy hiteraka asa sy hampiroborobo ny toekarena fotsiny io, fa hampiroborobo ny fivezivezin'ny mpizahatany mankany amin'ireo nosy. Ny praiminisitra dia nanondro ny tobin'ny fanatanjahantena Korman, ny laparasi Wharf, ny fotodrafitrasa Port Vila Urban Road Infrastructure, ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Bauerfield, ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Pekoa, ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Whitegrass ary ny fivoaran'ny làlana momba an'i Tanna sy Malekula ary ny tariby ambanin'ny ranomasina ho ohatra mahazatra amin'ny faharetan'ny fotodrafitrasa.
Nofaranany tamin'ny filazany hoe: "Tsy maintsy miray amin'ny fotoana rehetra isika mba hananganana Vanuatu tsara kokoa ho an'ny taranaka ho avy - ny zanaka rahampitso."